Nigerian Fintech Brass na-emechi okirikiri ego $1.7M
"Ụlọ akụ ọhụrụ nke Africa maka mmalite na SMEs" ịgbasa na South Africa & Kenya na-esote ego
Brass, ụlọ akụ dijitalụ nke Naịjirịa na-enye ohere dị mfe maka ọrụ ụlọ akụ dị ọnụ ala maka obere azụmaahịa na obere azụmaahịa (SMEs), enwetala $ 1.7mn na ego iji gboo mkpa ụlọ akụ na-enweghị oke nke ndị ọchụnta ego mpaghara, ndị ahịa na azụmaahịa na-eto ngwa ngwa.
Agba ego a na-ahụ ka Olugbenga 'GB' Agboola (Onye hiwere Flutterwave), Ezra Olubi (Onye guzobere Paystack, nke Stripe nwetara), Hustle Fund, Acuity Ventures, Uncovered Fund na Ventures Platform.
Ego ọhụrụ a ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite mgbasawanye Brass na South Africa na Kenya - naanị otu afọ ka emechara ya, ọ ga-amalitekwa ụdị ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche, gụnyere mgbasawanye nke akara mmalite n'ahịa kredit ka ọ na-achọ. diversify ya ahịa nso.
Amalitere na Julaị 2020 site n'aka Sola Akindolu (onye bụbu onye isi ngwaahịa na Kudi) na Emmanuel Okeke (onye bụbu onye njikwa injinia na Paystack), Brass na-akwado ndị SME nwere ọrụ ụlọ akụ zuru oke na ọkwa azụmaahịa n'ofe klaasị azụmahịa dị iche iche, na-enyere ha aka inweta. nghọta ka ukwuu na njikwa ego ha na-arụ ọrụ na ike ịbawanye ụlọ ọrụ ha.
Ikpo okwu ugbu a na-etu ọnụ ahịa ngwaahịa niile ahaziri n'ụdị dị iche iche nke mkpa ụlọ akụ azụmaahịa, gụnyere kredit & ọrụ ịkwụ ụgwọ, njikwa ụgwọ ọrụ na mmefu, nkwado API na ọtụtụ ọrụ azụmaahịa ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, Brass ejirila puku kwuru puku azụmaahịa, nyefee ihe karịrị $2mn na kredit wee malite Brass Capital n'oge na-adịbeghị anya - ọrụ ego na-enye ego iji kwado ọbụna azụmaahịa na-eto ngwa ngwa.
Ọtụtụ n'ime ndị ahịa Brass na-eji ikpo okwu dị ka ndị na-eweta ọrụ ego ha na-arụ ọrụ na ebe ndị ahịa ya ugbu a gụnyere ihe amasị Send.ng, Mono na Eden yana ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akwụkwọ na nnukwu ụlọ ahịa.
Ikpo okwu a na Flutterwave na-arụkọkwa ọrụ iji kwalite atụmatụ mgbasawanye ya n'ofe Africa.
N'ikwu okwu banyere ego ahụ, Sola Akindolu, onye na-arụkọ ọrụ na onye isi oche nke Brass, kwuru, sị: “Mkpa ndị bụ isi nke SME nke Africa dị oke mkpa na pụrụ iche dị ka nke ndị ahịa ha na-eje ozi kwa ụbọchị ma ugbu a karịa mgbe ọ bụla, anyị chọrọ ngwọta ọrụ ego ọhụrụ na ọkwa ụwa nke na-emezu atụmanya ha.
Azụmahịa obodo ndị a akwadola akụ na ụba anyị ruo ọtụtụ iri afọ, na-abụ ọkpụkpụ azụ nke ọganiihu Africa ugbu a ma ugbu a bụ oge ịkụ nzọ na ha. "
"Na Brass, anyị emeela nnukwu ihe ịga nke ọma n'afọ gara aga iji lụso otu n'ime ndị ahịa Africa na -enweghị oke aka mana mana enwere atụmatụ kredit $ 5.1 n'ụwa niile, ọrụ anyị adịbeghị anya.
Nke a bụ ya mere anyị ji enwe obi ụtọ ịnabata n'ụgbọ mmiri ọtụtụ ndị nwere ahụmahụ na ndị na-etinye ego na atụmatụ, ndị nka ha ga-arụ ọrụ dị mkpa ọ bụghị nanị n'ihu mgbasawanye anyị na South Africa na Kenya, kamakwa na ọchịchọ anyị n'ọdịnihu na mpụga kọntinent ahụ. ”
Ugbu a, SME na-etolite 99% nke azụmahịa niile nke Naijiria, ọtụtụ n'ime ha na-ezute otu nnukwu mgbochi okporo ụzọ nke butere 55% - 68% nke SMEs n'ahịa na-apụta bụ ndị ụlọ ọrụ ego anaghị echekwa ya - nnukwu enweghị ohere ịnweta ọnụ ala, dị elu. -ịdị mma na ọrụ ego ahaziri iche.
N'ihi nke a, azụmahịa ndị a na-ejedebere na ọrụ ụlọ akụ ọdịnala na-adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ha na-anọgide na-akwụghị ụgwọ n'ihi ịnweta na ọnụ ahịa.
Nke a abụghị naanị butere ihe ruru $ 5.1tn kredit maka SMEs na Naịjirịa na akụ na ụba ndị ọzọ na -apụta, kamakwa nnukwu enweghị akụrụngwa maka ụlọ ọrụ ndị a ịghọta ọrụ ego ha nke ọma wee mee mkpebi azụmaahịa dị oke mkpa.
Kola Aina, Onye guzobere na Onye Mmekọ General na Ventures Platform, kwuru “E rere anyị ozugbo na ozi Brass iji mee ka ọrụ ụlọ akụ maka obere azụmaahịa. Ruo ogologo oge, ụlọ akụ anaghị arụ ọrụ maka ndị ahịa ha.
Ihe ịma aka a na-adịghị ala ala maka obere azụmaahịa, yabụ anyị nwere obi ụtọ ịbụ onye mmekọ Brass ka ha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ụlọ akụ maka azụmaahịa Africa - site na ngwa ahịa ha emebere iji nyere azụmaahịa aka ịga nke ọma. "
Elizabeth Yin, Onye Mmekọ General na Hustle Fund na-agbakwụnye "Obi dị anyị ụtọ ịkwado Sola na ndị otu Brass bụ ndị na-enye ndị ahịa Africa teknụzụ ego dị oke mkpa, malite na azụmahịa nke Nigeria ~ 41.5 nde.
Anyị kwenyere na gburugburu ebe obibi achụmnta ego nke Africa, ngalaba fintech na -ahụ mgbanwe na -enwetụbeghị ụdị ya, Brass na -ebute ụzọ na nke ahụ, na -akwado azụmaahịa mpaghara na ndị ọkachamara na teknụzụ ụlọ akụ iji bulie uto ha. Anyị nwere obi ụtọ maka ọhụụ ha, a kwanyere anyị ùgwù isonyere ha na njem ha. "
Ntinye ego nke Brass ruo ugbu a egosila ọtụtụ ndị ọchụnta ego mmụọ ozi nwere ohere na teknụzụ teknụzụ Africa gụnyere Olumide Soyombo nke Voltron Capital, Leonard Stiegeler, Fola Olatunji-David, Yemi Lawani na ndị isi abụọ sitere na nnukwu ụlọ akụ Nigeria.
Ugbu a, ịnweta ọrụ ngwọta ụlọ akụ zuru oke ka bụ otu n'ime ihe mgbochi kachasị mkpa maka SMEs n'Africa dịka a na-eme atụmatụ na mpaghara SME nke kọntinent nwere oke ego ego kwa afọ karịa ijeri US $ 136.
Dị ka ụlọ akụ ụwa siri kwuo, azụmahịa ndị a na -eji 80% nke ndị bi na Afrịka, na -akọwapụta mkpa ọ dị na akụ na ụba mpaghara ma na -egosipụtakwa mkpa ha maka nkwado ọzọ.
Lexi Novitske, Onye Mmekọ jikwaa na Acuity Ventures, mechie “Ezigbo ohere ahịa na ụlọ akụ dijitalụ n'Africa na -enyere obere azụmaahịa aka.
Ulo oru ndia na -achoputa ngwa oru iji tụọ nha nke ọma; Site na mmekorita Brass ha ga-enwe ike itolite n'akụkụ onye mmekọ gbara mbọ ruo ogologo oge. Ka ọ dị ugbu a, isi mmalite data na Africa ka na -amalite.
Ngwa ngwaahịa nke Brass gụnyere ịkwụ ụgwọ na ọrụ dashboard ọ bụghị naanị na -enye obere azụmaahịa ime obodo nghọta na arụmọrụ karịa ọrụ ha, mana na -enyere Brass aka ịnye ngwaahịa ụlọ akụ na -egbo mkpa ndị ahịa a n'ihe egwu dị ala. ”